Voan'ny homamiadana ve i Bob Roll? - Lanja
Tena > Lanja > Bob roll weight loss - vahaolana azo ampiharina
Voan'ny homamiadana ve i Bob Roll?
Izymananafomba sarotra amin'ny sarakatycancer, saingy nanapa-kevitra ny hanamafy izany izy ary mbola hanarona ilay racethat a Tour de France biker ho anao.24. 2009.
Iza ny vadin'i Bob Roll?
Nitendry gitara nandritra ny 50 taona mahery i Bob Seger, saingy misy zavatra betsaka kokoa ho an'ilay lehilahy fa tsy ny gadon-kira fotsiny. Manomboka amin'ny taranja atletika ka hatramin'ny fisotroan-dronono, misy fahamarinana marobe tsy fantatra momba ity rocker mahazatra ity. Ny ankamaroan'ny olona dia misy vahoaka marobe.
Ary marina izany an'i Bob Seger. Ankoatry ny maha mpitendry zava-maneno talenta azy dia atleta sy mpifaninana mandritra ny androm-piainany koa izy. Niverina tany amin'ny lisea Michigan dia efa saika hilalao baolina kitra izy, indrindra ny toerana maha-quarterback ilay kianja, izay nahatonga azy hitodika tany amin'ny atletika.
Ny taonany nanantena faran'izay haingana araka izay azo atao dia nanentana ny iray amin'ireo hira tiany indrindra. Raha nilaza tamin'ny The Mercury News izy tamin'ny taona 2019, 'Te-hanoratra hira momba ny maha-mpihazakazaka foana aho. Heveriko fa tsy misy manana, fa teo no nipoiran'ny lohateny hoe 'Manohitra ny Rivotra'. 'Izaho dia mpihazakazaka lavitra ary mieritreritra aho fa izany dia tany amin'ny lisea ary mieritreritra aho fa mahazo ny fahaizako miasa.' Mihazakazaka manohitra ny rivotra i Seger, tsy amin'ny menaka ihany fa amin'ny rano koa.
Tamin'ny taona 2001 dia nandresy tamin'ny hazakazaka Port Huron-to-Mackinac any Michigan ny sambo fitondra-tsambo nataony. Ary nivadika ho tompony azo ampiharina izy io. Nifandimby namily ny sambo ny rehetra, ary toy ny olon-drehetra izy tamin'ny fihodinana. 'Fony mbola tanora tany amin'ny lise i Seger tamin'ny fiandohan'ny taona 1960 dia notapahiny ny nifiny mozika ho mpitendry gitara sy mpihira tamina tarika maromaro tany amin'ny faritr'i Detroit; ny tarika tena izy dia trio antsoina hoe Decibels, izay nanatevin-daharana an'i Joined EddieAndrews, izay hitarika ny asan'i Seger avy eo.
Taorian'ny nifindrany tany Ann Arbor, Michigan, dia niditra tao amin'ny tarika antsoina hoe Town Criers i Seger, avy eo nifamadika ekipa indray hilalao fitendry miaraka amin'i Doug Brown sy i Omens. Rehefa avy nanova ny anarany hoe Beach Bums somary mahatsikaiky izy ireo dia namoaka tokana antsoina hoe 'The Ballad of the Yellow Beret', sombin-tantara an-tsarimihetsika nataon'ny Sergeant Barry Sadler tamin'ny 1966 'The Ballad of the Green Berets' ietnam War-era Draft Dodgers, ary farafaharatsiny mety ho tratra teny an-toerana izany raha tsy nandrahona ny hitory i Sadler ary voatery nalaina avy tao amin'ireo magazay ireo firaketana. Taty aoriana tamin'ny 1966, nandeha irery i Seger ary nahazo ny laharam-pahavoazana sasany tamin'ny Michigan niaraka tamin'ny 'East Side', Story 'ary' HeavyMusic ', hany ka nafoiny ny mari-pamantarana Cameo Records.
Taorian'ny nijanonany fotoana fohy tany amin'ny oniversite dia niverina tamin'ny mozika izy tamin'ny 1969 ary nanamafy ny ezaka nataony mba hahatonga azy io ho lehibe. Izy no nahazo ny laharam-pahamehana voalohany tamin'ny fiandohan'ny taona 1969 tamin'ny taona 70 tany ho any rehefa nahazo ny laharana faha-17 tamin'ny Billboard Pop Charts i 'Ramblin' Gamblin 'Man', nomena tamin'ny fomba ofisialy ny rafitra Bob Seger. Saingy tsy nanamafy ny fahombiazan'ny haino aman-jery Seger tamin'ny fahombiazany na ny lazany teo amin'ny firenena tany am-piandohan'ny taona 70, ary nanohy namoaka ireo tokan-tena sy rakikira izay tsy dia nahitana firy izy.
Fahagagana iray monja nandritra ny fotoana kelikely izany, niaraka tamin'i 'Ramblin' Gamblin 'Man' ho 40 mahery tampoka mandra-pahatongan'ny 'Night Moves' teo amin'ny top 5 tamin'ny 1976. Nanomboka tamin'izay, Seger dia milina iray Hit ny firenena sy eran'izao tontolo izao rehefa tany amin'ny faritra sasany tany afovoan-tany izy nandritra ny taona maro. Na dia fihetsika somary manjavozavo aza izany ho an'ny ankamaroan'ny Amerikanina tamin'ny voalohan'ny taona 1970, dia superstar tao amin'ny fanjakan'ny tanànan'i Michigan izy.
Tamin'io herinandro io ihany tamin'ny 1976 dia nilalao teo alohan'ny vahoaka vitsivitsy tao amin'ny bara tsolika iray tao Chicago izy, ary nandray ny lampihazo koa teo imason'ireo mpankafy 76,000 nandeha teo amin'ny Silverdome any Pontiac, Michigan. 'Bob Seger dia nandoa onitra bebe kokoa noho ny artista rehetra ao amin'ny Billboard Top 40 mitambatra ankehitriny.' Angamba ny antony nahatonga ny hiran'i Seger nihaona tamin'ny olona maro hatry ny ela dia noho ny maha-izy azy ireo.
Melodies toy ny 'Night Moves' dia mahatsapa tena misy tokoa satria izy ireo, satria ilay mpihira-mpihira dia nisintona tamin'ny tena fiainana mba hanoratra ny forongony. 'Tena mistery tokoa ny fanoratana, amin'ny fomba hafa mihitsy no anaovako azy.' Nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'i In the Studio with Redbeard, Seger dia nanambara fa tena mila miasa amin'ny 'Night Moves' miaraka amina 'Italiana volo' izy niaraka tamin'izy 19 taona.
Araka ny Rakipahalalana momba ny firaketana hira malaza malaza, ReneAndretti, sakaizan'i Seger voalohany fony izy zatovo. Saingy ny tantaram-pitiavana, na dia niavaka aza, dia nivadika ho mampalahelo. Nilaza tamin'ny Detroit Free Press tamin'ny taona 1994 ilay mpihira hoe: 'Niasa ny sakaizanao ary niverina izy dia nanambady azy izy.
Ny foko torotoro voalohany. Soa ihany fa naharesy an'io fahadisoam-panantenana io i Seger. Nanambady ny vadiny fahatelo, Juanita Dorricott, nanomboka ny taona 1993.
Ary ny eran'izao tontolo izao dia nanao fihetsiketsehana tamin'ny alina. 'Avy amin'ny traikefa iray manontolo, nifarana tsara ho an'ny rehetra izany. Ny Eagles dia iray amin'ireo tarika malaza tamin'ny taona 1970.
Ny feon'izy ireo notarihin'ny firenena dia mitovy dika amin'ny folo taona. Izy ireo koa dia karazana supergroup, toy ny namenoan'izy ireo mpilalao sy mpamoron-kira mahomby toa an'i Don Henley, Joe Walsh ary Glenn Frey. Na eo aza izany fahatokisana ati-doha rock 'n' roll izany, very antoka tanteraka ny tarika rehefa niatrika stompers mihozongozona sy sarotra izy ireo noho ny hiran'izy ireo niasa tamin'ny rakitsary The Long Run 1979.
Raha ny filazan'ny mpitendry gitara t o Eagles Don Felder, rehefa tsikaritr'ilay tarika fa ny feon-dry Frey dia tsy dia voaseho tao amin'ilay rakikira, Frey, Henley ary ilay mpilalao sarimihetsika JD Souther no namorona ampahany kely tamin'ilay hira. Laharana haingana, nitehaka tanana izy io. Nisy olana iray anefa.
Tsy afaka nanao chorale ry zareo. Ary avy eo dia nanapa-kevitra i Frey fa hitady fanampiana avy any ivelany amin'ny endrika Bob Seger. Niantso azy i Frey ary nihira ny zavatra noresahin'izy sy ireo voromahery hafa, hatreto ary nampiarahina ny feon-kira.
Avy eo i Seger dia nisintona ny gadon'ity koro ity avy eo ary avy eo ny lohaten'ilay hira. Ny valiny dia 'Heartache Tonight'. Seger dia nisaina tamin'ny fiaraha-nanoratra ary ny hira dia lasa ny laharana fahadimy sy farany ho an'ny Eagles. 'Izaho no nanoratra ny fizarana Heartache Tonight, ary i Glenn no nanoratra ny andininy rehetra, ary avy eo Don sy JD Souther no namarana ilay hira.' Seger dia nipoitra matetika ho feon'ny sarambabem-bahoaka: mpiasa, olon-tsotra miasa, toa an'i Seger, dia avy any ah.
Izany no antony lehibe nampiasany ny hirany 'Like a Rock' tamin'ny dokambarotra ho an'ny kamio Chevrolet nataon'i U. S. nandritra ny taona maro.
Fihetsika iray izay nitarika azy tamin'ny fangatahana somary hafahafa ihany koa tamin'ny mari-pamantarana rakipeo -track tape no nipoaka tamin'ny faramparan'ny taona 60 sy 70. Izy io dia ambony noho ny firaketana vinyl amin'ny fomba iray farafaharatsiny. Ny mozika dia azo entina amin'ny fantsom-pifandraisana, ary ny mpamaky fiara dia namaly tamin'ny alàlan'ny fanitarana ny dabilio valo amin'ny fiara sy kamio.
Na izany aza, ny kasety mirindra kokoa dia nihoatra ny lalana valo ho toy ny endrika mozika azo raisina. Tamin'ny 1982 dia efa nanakana azy ireo ny firaketana an-tsoratra. Saingy nihevitra i Seger fa fanakorontanana ho an'ny besinimaro izany.
Nolazainy tamin'ny People Magazine tamin'ny 1983. Misy mpankafy an'arivony maro any izay mbola manana làlana valo ao anaty pickup na RV-ny. Sarotra ny fotoana.
Betsaka amin'izy ireo no tsy manam-bola hahazoana rafitra vaovao, rakitsary The Distanc e 1982 amin'ny lalana valo, raha i Seger kosa nameno ny kianja sy ny kianja hatramin'ny taona 1990 ary ny ankamaroan'ny hirany lehibe dia mbola ao amin'ny radio radio mahazatra rehetra heno ankehitriny , ny dingana tokana niavaka tamin'ny asany dia nanomboka maty tamin'ny faran'ny 1980. Na izany aza, ny folo voalohany farany azony dia izy no lehibe indrindra. Tamin'ny 1987 dia nahatratra ny laharana voalohany izy ary tamin'ny fotoana tokana tamin'ny 'Shakedown', ny fandraisany anjara, ny R & B-anjara lehibe tamin'ny feon-kira Beverly Hills Cop II.
Fandresena ho an'ilay rocker efa za-draharaha, 'Shakedown' dia nahazo ny fanendrena an'i Seger ho an'ny hira voalohany tsara indrindra ho an'ny Academy Awards. Fa ny tena mahaliana dia tsy izy no voalohany ilay hira. Ny mpamokatra ny Beverly Hills Cop II dia nanakarama an'i Glenn Frey, izay nahavoa mafy ny 'The Heat isOn' avy amin'ny Beverly Hills Cop voalohany, mba handraisana hira iray ho an'ny tohiny.
Araka ny The Billboard Book of Number One Hits, tsy tian'i Frey ny tononkiran'ny mpamoron-kira Keith Forsey sy Harold Faltermeyer. tratran'ny aretin-tsaina izy taoriana kelin'ny nialan'i Frey, i Irving Azoff, filohan'ny MCA Records, niantso an'i Seger ary nangataka azy hanoratra tononkira vaovao sy handrakitra ilay hira. Angamba ny hira malaza indrindra ao amin'ny katalaogin'i Bob Seger dia ny 'Old Time Rock and Roll', noho ny fisokafany piano riff, ny fiakarana feo nataon'i Seger, ary ny solo sax mamiratra.
Rehefa navoaka voalohany izy tamin'ny 1979, dia niditra tao amin'ny Top 30 tao amin'ny Billboard Hot 100. Taty aoriana dia nanjary hira nandritra ny taona maro izy io rehefa nampiasaina tamin'ny seho malaza RiskyBusiness tamin'ny 1983 izay nahitana tanora Tom Cruise nandihy amin'ny atin'akanjony. Saingy hita fa saika nieritreretana ny 'Old Time Rock and Roll', nandrakitra ny famokarana latinina ho an'ny rakitsary Stranger in Town Seger avy amin'ilay mpamoron-kira Alabama George Jackson.
Tian'i Seger ilay koro fa tsy ireo andininy, ka izy ihany no nanoratra ireo. Na izany aza, tsy noheveriny fa ho lasa mpitovo irery ilay hira, na dia hira malaza fotsiny aza, ka tsy nanelingelina ny fitanisana ny tenany ho mpamoron-kira izy fa tsy nahita vola be tsy azo refesina tao amin'ny mpanjaka. Raha nilaza tamin'ny mpanao fanadihadiana tamin'ny radio izy tamin'ny 2006, 'Izany no zavatra adaladala indrindra nataoko.' Tamin'ny taona 1994, tamin'ny taona namoahan'i Seger ny rakikirany Greatest Hits, nipoitra ihany koa izy tamin'ny lahatsoratra mozika ho an'ny 'Night Moves', efa ho 20 taona taorian'ny namoahana ilay hira tany am-boalohany.
Mampihetsi-po ny famoizam-po amin'ilay hira ilay lahatsoratra. Voarakitra ao anaty fifantohana malefaka nofinofy izy io ary napetraka tao amin'ny teatra fampandehanana fiara amin'ny fotoana sasany amin'ny lasa lavitra sy tantaram-pitiavana. Zazalahy kely no milalao sy mihazakazaka, ao anatin'izany ny mpivady afovoany izay nolalaovin'i Daphne Zuniga sy Matt LeBlanc an'i Melrose Place taloha kelin'ny nanombohan'ny namana azy ary nahatonga azy hanana anarana an-trano.
Mino izany na tsia, Seger raha ny marina dia nanao fanazaran-tena kely. Araka ny nambaran'i LeBlanc tao amin'ny andiany Top Gear dia niantso ilay mpilalao sarimihetsika ho any amin'ny tranofiara i Seger ary nilaza taminy hoe nanao ahoana izany fony izy mbola tanora ary handeha hamily sy hanandrana haka zazavavy. Avy eo ilay rocker dia namoaka tavoahangy tequila iray, tavoahangy tequila iray manontolo, izaho sy Bob Seger, ary avy eo nandondom-baravarana izy ireo, 'Vonona ho anao eo amin'ny sotera!' Mamo aho tamin'ity lahatsoratra ity. 'Na samy Seger sy LeBlanc aza dia samy hafa toaka amin'ny famonoana lahatsoratra, toa milamina ihany ny zava-drehetra tamin'ny farany.
LeBlanc dia nanana asa maharitra ary maharitra, raha i Seger Greatest Hits kosa dia nantsoina hoe Diamondra rehefa nivarotra kopia 10 tapitrisa mahery tany Etazonia. Rehefa nihena ny asan'i Seger tamin'ny taona 1990 dia nisintona tamim-pahanginana tamin'ny sehatry ny mozika izy mba hanana tanjona ny hifantoka amin'ny fiainam-pianakaviana. Nilaza tamin'ny CBS Sunday maraina tamin'ny 2007 izy hoe: 'Nanan-janako aho, 47 taona ary tara be tamin'ny fiainako, ary efa nanao an'io nandritra ny 30 taona misesy aho, nanoratra hira, nanao rakitsoratra sy fitsangantsanganana ary nanomboka ny fizotrany.
Avy eo dia nananako ny ankizy ary, fantatrao, mety ho fotoana mety hampiadana sy hijery azy ireo hitombo - tsy hanana fotoana hahitanao azy intsony ianao. 'Taorian'ny rakitsorany 1995 Mistery dia tsy namoaka rakikira hafa izy hatramin'ny 2006, Face thePromise. Nitsangatsangana izy nanohana an'io tamin'ny 2007, ny daty fampisehoana voalohany nataony hatramin'ny 1996.
Mazava ho azy, tsy nanjary tanora kokoa i Seger ary ireo taona rehetra niainan'ny olona teny an-dalambe dia nahavita nampidi-doza. Tamin'ny taona 2017, rehefa feno 72 taona izy, dia namaky CD teo alohan'ny hahatongavany hanao fitsidihana konseritra. Nilaza taminy ny dokoterany fa raha miharatsy ny soritr'aretina dia mila manafoana ny fitsidihana izy ary mila fandidiana.
Eny, nifoha tamin'ny 'drag' i Seger indray maraina tamin'ny septambra 2017. tongony havia. Andro vitsy taty aoriana dia nanambara ny mpitantana azy fa hahemotra mandritra ny fotoana tsy voafetra ireo daty 18 ambiny amin'ny fandaharam-potoanan'ny fitsangatsanganana.
Ireo olana ara-pahasalamana ireo dia nahatonga azy hisotro ronono indray rehefa nanambara ny 'Travelin' Man Tour 'izy tamin'ny taona 2018 sy 2019, izay no fotoana farany handehanany an-dalambe. Zahao eto ny iray amin'ireo lahatsoratray farany eto! Lahatsoratra grunge misimisy kokoa momba ny zavatra tianao indrindra. Misoratra anarana amin'ny fantsona YouTube anay ary maneno lakolosy hialana amin'ny iray.
Aiza no misy an'i Bob Roll izao?
'' Ary rehefa niantso an'i Roll, vadin'i Roll i Armstrong,Chiara, namporisika ny vadiny hanaiky. '' Mino aho fa manana talenta sy toetra mampino i Bob, '' hoy izy. '' Afaka nanatsara ny toe-tsain'olona izy.
“Sary nataon'i Bob Ross ity.” 'Bob Ross -' Mpitantara: - dia iray amin'ireo mpanao hosodoko amerikana malaza tamin'ny taonjato faha-20. Fantatra amin'ny sary perm, ny toetrany ary ny fizaran-tany izy.
Ny olana dia tsy misy mahalala ny misy anao. ”Izaho no hampiantrano anao raha mbola miaina ny hafaliana amin'ny sary hosodoko izahay.” GPS: “Amin'ny 800 metatra, mihodina miankavia amin'ny lalana McClearen.” Misy Bob Ross mihoatra ny 1.000 -Molokoana an'izao tontolo izao Ross, tsy azonao atao izany.
Ary tsy midika izany fa mbola tsy nanandrana ny olona. Betsaka ny zavatra voasoratra momba azy ary betsaka ny voasoratra momba izany satria tsy misy dikany ny marina. Tamin'ny lahatsoratra 1991 tao amin'ny The New York Mal, nilaza i Bob fa nahavita hosodoko efa ho 30.000.
Ka rehefa lasa nividy iray ho an'ny rahalahiny ity lehilahy ity dia tsy noheveriny ho olana izany. Tsy nahita iray tamin'ny lavanty, tamin'ny galerie, tamin'ny internet izy. 'Tsy fantatray.' Ary azo antoka, be dia be ny sary hosodoko avy izay notsindromin'i Bob Ross. 'Tap tap, tap, tap roll -' Saingy tsy tena izy ireo.
Dia nanontany tena izahay hoe: aiza no mety tsy hisy fanangonana sary hosodoko izay mety mitentina an-tapitrisany dolara? 'Nanomboka tamin'ny taona 2017. Voalamina tsara izy ireo. Saingy iray amin'ireo zavatra izay tokony hamoahantsika ireo rehetra ireo hahitantsika izay eto, natahotra ny hikasika ireo sary hosodoko ireo aho.
Nieritreritra aho hoe: 'Sarobidy noho izy ireo izy ireo.' “Ka eo no misy ny sary hosodoko rehetra. “Tsy misy rivotra.
Ampidirina am-pilaminana ao anaty efitrano iray izy ireo - '' Voalamina tsara - '' Azo antoka fa tsy serivisy fonon-tànana fotsy. 'Tsy mikasa ny hivarotra azy ireo ianao. Tsy an'i Bob izany. “Tsy tonga tao an-tsaintsika mihitsy izany satria tsy tena niresaka momba an'io mihitsy isika.” Nandeha toy izao ny seho: 26 minitra ny halavany, tsy nosedraina ary tsy hitanao ny sary vita vita talohan'ny nanombohanao.
Nahavita andiany 31 izy miaraka amina programa 13 miaraka amina kinova telo. Betsaka ny sary hosodoko. ”Tsy betsaka ny olona mahalala fa nahavita ny sary hosodoko in-telo i Bob: ny iray talohan'ny fampisehoana, ny iray nandritra ny fampisehoana, ary ny iray taorian'ny fampisehoana.
Izany no mahatonga ny maro amin'izy ireo. “Hanoratra 'boky' momba ilay boky tena marina izy. Nomarihiny ny 'TV' iray tamin'izy ireo ary tsy dia tsara izany.
Ary avy eo ny fahatelo dia homarihina ho 'Kowalski' ho an'ny reniko. 'Tsy tiako ny kintan'ny sarimihetsika. Efa antitra aho fantatrao fantatro fa tianao ho fantatra hoe inona no nandehanan'ity tovolahy ity niaraka tamin'ity vehivavy antitra ity.
Hainao ve fa? Mitovy taona izahay sy i Bob. '' Te hampahafantatra anao an'i Annette Kowalski namako efa ela aho. Annette, tongasoa amin'ny fampisehoana. '' Misaotra, Bob, 'Nandray anjara tamin'ny endrika kanto maro hafa i Annette noho i Bob Ross.' Ary nampahery azy foana aho. ”Tsy misy sary hoso-doko feno raha tsy misy daisy vitsivitsy.
Ka ndao ampiana daisy vitsivitsy: Tiako ny fotsy madio sy madio entiny amin'ny fahitalavitra. ”Nahita an'i Bob Ross koa izy, tsy nahy izany. Rehefa maty ny lahimatoan'i Walt sy Annette dia nosoniavin'i Walt i Annette ho lesona miaraka amin'ilay mpanao hosodoko amin'ny fahitalavitra Bill Alexander. “Izaho sy ianao, miaraka amin'ny herintsika mamorona rehetra, dia hamorona rahampitso tsaratsara kokoa isika.
Tiako ianao! ”Tsy nampianatra intsony anefa i Bill. Ka raha izany dia nahazo bandy antsoina hoe Bob Ross izy ireo. “Eny, kilasy dimy andro miaraka amin'ity Bob Rossin Clearwater, Florida tsy fantatra ity. “Ndao ataontsika izany drafitra izany, mifanaraka daholo izy rehetra.
Ataovy izay hahomby - eo. ”“ Tamin'ny andro voalohany niarahako nianatra niaraka tamin'i Bob, dia nahaliana ahy tokoa i Bob ka tsy afaka nandoko aho. '' Nanana fahatsapana tsara momba azy aho rehefa nahita azy. ”Ary lasa antso tsara izany.
Nifindra niaraka tamin'i Walt sy Annette i Bob tamin'ny farany. Ary ankehitriny dia saika manana ny sary hosodoko rehetra izy ireo. “Sary hosodoko Bob Ross ity - satria nisy nilaza tamiko fa.” “Afaka mahita sary hosodoko Bob Ross tsara aho izao.” “Betsaka ny olona mieritreritra fa ny sary hosodoko rehetra, ny hazo tokana sy ny iray Berg dia tsy maintsy hosodoko Bob Ross. ”“ Karazan-kazo sy tendrombohitra tokoa aho. ”“ Azonao antoka fa izy irery ihany no nandoko sary teo aloha. ”Misy fambara vitsivitsy momba an'ity na tsia ny sary hosodoko na tsia Bob Ross. “O ry Bob, tsy naniry olona izy.
Tsy haiko ny antony, tsy tiany ny olona inoako. Nikasika ity hazo ity indray mandeha izy, indray mandeha. Ary ny rahona dia tsy rahona Bob Ross. “Toy ny mamaritra ny tsiron'ny sôkôla io.” “Nandeha izany.” “Taona maro lasa izay, ny raiko dia tsy maintsy niresaka tamin'ny vehivavy iray izay nividy sary hosodoko izay tsy sary hosodohan'i Bob Ross ary kivy tanteraka. ”“ Tantara angano i Bob ary nanjary antony lehibe teo amin'ny fiainan'ny olona. '' Ho an'ny tambajotran-tseraseranay dia manana teny nalaina mahafinaritra izahay ny zoma - miaraka amin'ny sary mahafinaritra - ary amin'ny Alarobia kosa dia teny fohy kokoa. “Angamba misy vato eto.
Dia nasiako vato kely teo, jereo - '' Misy vato kely - '' Angamba manana namana kely atao hoe Harold izy. '' Izany no Harold, ilay vato, eto indrindra - '' Ary indraindray dia esoriko fotsiny ao anaty teny miantso ny alarobia mahazatra fotsiny satria tena mahafaly ahy izany. '' Eo izahay ho an'ireo mpankafy an'i Bob Ross.
Raha miantso anay izy ireo dia hihaino lava isika. ”“ Raisinao ny telefaona ary hoy izy ireo hoe: 'Misy ny kotsa. Notantaraiko anao izany - niverina androany.
Antso an-telefaona kely mahafinaritra fotsiny izy ity. ”Ary izay ihany, ireo mpiasa ao amin'ny Bob Ross Inc. dia manao izany. “BOBROSY 1-800 izao.
Izahay, sa tsy izany? ”Fonosinao sy alefanao ny loko maro karazana an'i Bob ary mitantana ny sariny maoderina ianao. 'Ity vehivavy ity dia nanintona an'i Bob tamin'ny molony, nandoko sary, ary avy eo napetraka teo amin'ny sandriny ny hoho ary misy paleta kely mazava eo aminy ny fantsika.' 'Ny tiako holazaina -' Na dia tsy nisy seho vaovao aza tao anatin'ny 20 taona mahery dia lasa sary maoderina i Bob. 'Bob Bob -' 'Bob Ross -' 'Bob Ross -' 'Bob Ross -' 'Ross -' 'Ross -' 'Ross -' 'Ross?' 'Ilay lehilahy volo! '' Ny volo boribory dia lasa toy ny zavatra tsy azony nilatsaka. ”“ Andao hoso-doko hazo faly vitsivitsy any. ”“ Ary hapetrakay eto ambany ilay kirihitra kely falifaly. ”Hatramin'ny nipoiran'i Bob Ross tao amin'ny Twitch tamin'ny 2014 ary nalaza be izy. “Matetika aho saika voan'ny aretim-po raha nanana 30 segondra sisa ary manomboka amin'ireo hazo lehibe izany. “Ity no talen'ny tenako ary tsy manam-potoana firy izahay.
Ary manao zavatra toy izany aho - mety nianjera ilay hazo taloha, nianjera fotsiny io hazo taloha io. Reraka izany. '' Miverina haingana dia haingana io fanaintainana io - tsy misy tsindry. '' Te ho mariky ny fahasambarana izy, raha ny marina.
Fantatrao fa ho tiany ny hevitra momba ny ba kiraro sy ny toasters ary ny waffles. 'Ary izay ihany no azonao vidiana - mbola tsy voafetra ny sary.' Tsy tonga tao an-tsainay mihitsy ny nanova ny foto-kevitra rehetra, fa tsy liana amin'ny fivarotana hosodoko izahay. ”“ Tsy azonay hazavaina tsara mihitsy hoe inona ity Bob Rossthing ity, fantatrao? Afaka manome anao eritreritra betsaka momba izany izahay.
Fa ny fitambarany - izany fotsiny, i Bob Ross, ilay persona. '' Tsy haiko - mety ho azonao tsara kokoa ny mamaly an'io fanontaniana io. Nahoana ianareo no eto? 'Fanontaniana lehibe izany -' 'Lazao amiko.' 'Tonga teny aminy ny olona ary nilaza hoe:' Oh, mitovy amin'ity lehilahy ity miaraka amin'ity afro ity ary tena adaladala tokoa izy ary mandoko toa ireo sary ireo izy ireo - iza 'Ary avy eo no jeren'izy ireo.
Ary hoy izy ireo: 'Andriamanitro ô - inona - tena tiako ity.' Ary avy eo mijery fizarana 50 eo ho eo izy ireo. '' Tsy afaka miverina amin'ny andro voalohany niarahako niaraka taminy fotsiny aho.
Ary manana ny fahatsapana aho fa izao tontolo izao dia mahita ny zavatra hitako tamin'io andro voalohany io. '' Faly be ianao. Hoy izy ireo: 'Ho fampirantiana ity.' Ary avy eo dia nasain'izy ireo nankany Smithsonian izahay hijery, hitranga amin'ny tantaran'ny Amerikanina, amerikanina io - matahotra mafy ianao.
The Museum of Modern America - '' Smithsonian National Museum of American History mihantona amin'ny tranombakoka. Bob - '' Eny, mety ho izany. Saingy mety tsy ilay Smithsonian - '' Satria nahoana, Bob? '
Taiza i Bobroll no nihalehibe?
horonan-taratasymanohy mitaingina bisikileta amin'ny lalana sy bisikileta amin'ny fialamboly. Teratany avy any Oakland, California aryamin'izao fotoana izaomonina any Durango, Colorado.
Ny maha-mpilalao sarimihetsika matihanina dia henjana, ary na dia manana andraikitra lehibe aza ny mpilalao dia tsy mitazona azy ireo eo amin'ny lisitra A mandrakizay. Fa misy safidy hafa foana. Na tsy tanteraka ny nofinofin'izy ireo Hollywood na tiany fotsiny ny karazana olon-dehibe dia nitodika tany amin'izy ireo ireto mpisehatra amin'ny indostrian'ny olon-dehibe ireto.
Tom Sizemore dia mavesatra Hollywood taloha izay nilalao blockbusters toa ny Saving PrivateRyan sy Black Hawk Down noho ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina. Ity fianjerana manokana ity dia nitarika mivantana tamin'ny asany an-tsokosoko sy ny laharana voalohany tamin'ny sarimihetsika olon-dehibe. Notantarainy ny teboka ambany tao amin'ny notaosiny By Some Miracle I Made It Out Of There, nanoratra fa ny horonantsariny tsy ara-dalàna dia vokatry ny zavatra roa: tapaka sy 'andevozin'ny famoizam-po' an'i meth. manelingelina ary mampiseho anao izay ataon'ny methamphetamine amin'ny fitsaranao.
Raha ny marina, amin'ireo zavatra mahatsikaiky rehetra nataoko dia izay no tena tiako haverina. 'Mila vola aho.' 'Marina.' Tsy tokony handray fanapahan-kevitra mihitsy ianao rehefa iharan'ny tsindry sy mila vola. 'Niverina tao amin'ny rehab i Sizemore taoriana kelin'izay, saingy naharitra efa ho folo taona vao tena madio tanteraka.
Nahavita nanohy ny asany indray izy taorian'izay satria nanam-bintana hanana faritra ambony be mpitia avo lenta, anisan'izany ny reboot Twin Peaks efa nandrasana hatry ny ela, ny kintan'i Maitland Ward, teo anelanelan'ny taona 2019, nandao ny fianakaviany miorim-paka ao aorianan'ny fankalazana fialamboly ho an'ny olon-dehibe. Raha nanazava tamin'ny TMZ izy, 'Nanokatra fotoana maro be aho satria manao an'io.
Heveriko fa voafetra aho raha sendra sendra tojo toe-javatra fanoratana iray fotsiny. 'Fantatr'i Ward fa nahazo ny fijeriny tamin'ity fanovana asa ity izy. Nanao doka momba ny asany tao amin'ny pejiny Instagram izy, izay niteraka fisavoritahana teo amin'ireo mpankafy raha toa ka kintana sarimihetsika efa lehibe izy na tsia.
Farany, tiany ny nifindra tany amin'ny indostria vaovao. Tamin'ny volana septambra 2019, hoy izy tamin'ny In Touch, 'Nanomboka daholo izany rehefa nanomboka nanao cosplay aho, izay no tena tiako ary nanomboka nojeren'ny olona izany, ary nanao akanjo lava aho. Izaho dia karazana fampiratiana foana karazan-tsarimihetsika, zavatra matihanina, tsy ela akory izay
Nahatsiaro ho vonona aho. 'Tsikariny koa ny TooFab fa nanao dingana kely tamin'ny fiovan'ny asany izy. 'Tsy dia nisy dikany izany rehetra izany nandritra ny dia naharitra dimy taona.
Izy rehetra dia nilentika tamin'ny tendron'ilay zavatra manaraka, nanoboka ny tongotro tao anaty rano. Ary isaky ny tiako izany, dia mitrandraka bebe kokoa aho mandra-poka rendrika tanteraka. 1991 Miss USA Kelli McCarty dia nanana ny asany tamim-pahitana fahitana tamin'ny fahitalavitra rehefa nandrehitra écran.
Ny andraikiny fanta-daza indrindra dia angamba Beth Wallace ao amin'ny opera savony mihoatra ny natiora. Raha ny fantatra dia ny fanafoanana ny filana no nahatonga an'i McCarty hitodika any amin'ny indostrian'ny olon-dehibe mihetsika, ary tiako be ny manao firaisana, ka io no fotoana mety indrindra hifandraisana amin'izay nisy ny filako. Tetezamita mora be io, heveriko fa ny televiziona mahazatra dia manomboka manomboka mitambatra amin'ny tontolon'ny olon-dehibe ihany. 'Raha vao nanomboka nanao an'io aho dia nahafinaritra ary nahafinaritra ahy.' Na dia mihetsiketsika aza i McCarty, ny fiovaovan'ny asanao dia nifamatotra tamin'ny volomaso nisondrotra sasany.
Raha niresaka tamin'ny Business Wire tamin'ny taona 2009 izy, dia nanambara izy hoe: 'Ny lehilahy efa nanao firaisana an-tsokosoko nandritra ny taona maro dia tena mijery ahy manao firaisana ara-nofo kokoa, ary nisy namana efa ela nilaza fa handany ny alina miaraka aminy mivady. 'Ny fangatahana toy izany dia mety ho avy amin'ny asa. Jaimee Foxworth dia nanjary nalaza ho kintan'ny zaza tao amin'ny Family Matters, nilalao an'i Judy, ny zandriny indrindra tamin'ireo ankizy Winslow manodidina ny mpifanila vodirindrina Steve Urkel ary vitsy ny fianakavian'i Winslow, Natosika i Judy taorian'ny faran'ny vanim-potoana fahefatra ary nesorina tamin'ny fampisehoana.
Hitany fa tsy an'asa izy ary mitady asa mafy. Tamin'ny faha-19 taonany dia nitodika tany amin'ny indostrian'ny olon-dehibe izy mba hividianana vola rehefa niady tamin'ny zava-mahadomelina sy alikaola. Niresaka tamin'i Oprah Winfrey taona vitsivitsy taty aoriana, nofaritan'i Foxworth ny fomba nanombohany niditra tao amin'ny indostria voajanahary tamin'ny kalandrie akanjo ba.
Nanomboka teo dia tsapany fa afaka manao zavatra betsaka kokoa amin'ny fakantsary izy ary nanaiky ny hitarika seho miharihary amin'ny mpilalao sarimihetsika hafa. Hoy izy hoe: 'Io no vola haingana indrindra tamiko. Tena tsinontsinona aho ary nisotro
Fony aho teo amin'ny raharaha Family dia nieritreritra aho fa tsy hijanona ny vola. Nihevitra aho fa tsy handeha mihitsy. 'ho tapaka.
Izany no antony ilazako ny tovovavy mba hanana safidy hafa foana. 'Tamin'ny naha-zatovo azy, i Scott Schwartz dia nanana andraikitra lehibe teo amin'ny kilalao Krismasy A Christmas Storyas Flick, izay tsy azo hadinoina fa nitaona ny lelany tamin'ny andry saina. Taty aoriana dia nanorotoro ny fon'ny ankizy erak'izao tontolo izao ilay mpilalao sarimihetsika rehefa fantatra fa niasa tamin'ny indostrian'ny fialamboly ho an'ny olon-dehibe izy.
Na dia aleon'i Schwartz aza mifikitra amin'ity lohahevitra reny ity dia nanapa-kevitra ny handraraka ny tsaramaso izy tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny talenta taona 2011, vokatra ao amin'ny birao, mpivarotra lahatsoratra
Sahabo ho dolara sy cents izany, momba ny faktiorako izany ary izay rehetra nilaina mba hametrahana tafo teo ambonin'ny lohako sy sakafo teo ambony latabatra, hoy aho. 'Fa maninona i Schwartz no tsy afaka mahita asa mitohy ao amin'ny Hollywood mahazatra, izay misy ifandraisany betsaka amin'ny fahanterana. Raha nanazava tamin'ny resadresaka nifanaovana iray hafa izy tamin'ny 2011, niova ny tarehiny rehefa tonga ny fahamaotiana, saingy tsy niova firy ny vatany raha nijanona 5'2 izy. tamin'ny fahatanorany taty aoriana.
Nanamarika ihany koa izy hoe: 'Tsy nanapa-kevitra ny hitsahatra tsy hanao zavatra mihitsy aho. Averina indray fa tsy nanakarama ahy fotsiny ny mpitondra. 'Zahao eto ny iray amin'ireo lahatsoratray farany eto! Fanampin'izay, lahatsoratra Nicki Swift misimisy momba ny kintana ankafizinao dia ho avy tsy ho ela.
Bob Roll ve dia sprinter?
Bob'Bobke'horonan-taratasyTeraka tamin'ny 7 Jolay 1960 tao Oakland, California) dia mpanao bisikileta, mpanoratra, mpanao asa soratra, mpanatan-daka amin'ny fahitalavitra taloha. Mpikambana tamin'ny ekipa bisikileta 7-Eleven hatramin'ny taona 1990 izy ary nifaninana tamin'ny ekipa Motorola Cycling tamin'ny taona 1991.horonan-taratasynanohy ny fifaninanana tamin'ny bisikileta an-tendrombohitra hatramin'ny 1998.
Impiry i Bob Roll no nanomboka ny Tour de France amin'ny bisikileta?
horonan-taratasynifaninana tamin'nyTour de FranceTELOfotoana, miaraka amin'ny farany nahavita ny faha-63 tamin'ny 131 tamin'ny 1986 niaraka tamin'ny ekipa 7-Eleven, mpisava lalana ho an'ny Amerikaninabisikiletaekipa.horonan-taratasydia nanana fidirana tsy mahazatra amin'ny fifaninanana hazakazaka sy ny fanatanjahantena.8 2012.
Nahazo sehatra tamin'ny Tour de France ve i Bob Roll?
Nahazo sehatra i Bob Roll1985 Coors Devils Cup Mt Diablo.
Ahoana no hifandraisanao amin'ny Bob Roll?
nyBob RollVoafetra ho an'ireo atleta 50 voalohany ny Moab Cycling Camp, miantso 970-948-1212 na mailaka chip_chilson@msn.com hisoratra anarana.
Iza i Bob Roll ary inona no ataony?
Bob Roll. ('Bobke' dia Tiorka atsimo amin'ny 'Bobby'.) Izy koa dia nanana tsanganana maro navoaka tao amin'ny VeloNews. Voalaza fa nanome sosokevitra izy fa i Joe Parkin, mpitaingina bisikileta matihanina ary mpanoratra, nifindra tany Eropa ary nanoratra ny teny fampidirana ho an'ny bokin'i Joe voalohany.
Iza moa i Bob Roll avy amin'ny ekipa bisikileta 7-Eleven?
Bob 'Bobke' Roll dia teraka tamin'ny 7 Jolay 1960, tao Oakland, California) dia mpitaingina bisikileta amerikana taloha, mpanoratra ary mpitsikera amin'ny fanatanjahantena amin'ny fahitalavitra. Mpikambana tao amin'ny ekipa bisikileta 7-Eleven hatramin'ny taona 1990 izy ary nifaninana tamin'ny ekipa Motorola Cycling tamin'ny 1991.
Oviana i Bob Roll no nijanona tsy nihazakazaka tamin'ny bisikileta an-tendrombohitra?
Roll nanohy ny fifaninanana tamin'ny bisikilety an-tendrombohitra tamin'ny taona 1998. Fantatra eo amin'ny tontolon'ny bisikileta i Roll, ary amin'ireo mpankafy fahitalavitra eraky ny telolafy, fatratra, antsoina hoe 'Bobke'. Nanoratra i Bobke: Ride amin'ny lafiny ilan'ny bisikileta, Bobke II, ary boky roa Tour de France Companion. ('Bobke' dia Tiorka atsimo amin'ny 'Bobby'.)